astra.today Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Uqikelelo July 2021 Kuba Zonke Iimpawu zeZodiac
Language Zonke 108 Ελληνικά English Dansk Deutsche Español Français Italiano Nederlands Norske Português Suomalainen Svenska Shqiptare Eestlane Gaeilge Lietuvis Magyar Polskie Română Slovák Slovenščina čeština Afrikaans Kreyòl ayisyen Esperanto Pilipino Fryslân Galego Hausa Ōlelo Hawaiʻi Hmong Igbo bahasa Indonesia Íslenska Wong jawa Català Kinyarwanda Қазақ Кыргызча Corsu Hrvatski Kurdî Latine Latvietis Lëtzebuergesch Malagasy Malei Malti Maori Cymraeg Faasamoa Funtsean Sugbuanon Sesotho Gàidhlig na h-Alba Soomaali Shona Kiswahili Sunda Türk Türkmenler O'zbek Chichewa Tiếng Việt Bosanski Yoruba Qhubeka Zulu Pусский български Український Српски Azərbaycan dili Беларуская Монгол Славомакедонец Татар Тоҷикӣv 日本の עברית ქართველი 한국어 አማርኛ عربي հայերեն 简体中文 中國傳統的 ગુજરાતી हिन्दी ខ្មែរ ಕೆನಡಾ ຄົນ മലയാളം मराठी नेपाली ଓଣ୍ଡିଆ ଅରିଜିୟା | پیسټو ਪੰਜਾਬੀ فارسی سنڊي සිංහල ไทย தமிழ் తెలుగు ئۇيغۇر اردو বাংলা יידיש
Ukuvumisa ngeenkwenkwezi Isazi ngeenkwenkwezi Uhlalutyo Ukuvumisa Magazino
Namhlanje lusuku lokuba neentlanganiso ezimnandi kwaye ubandakanyeke kwiingxoxo ezinomdla, ezenzeka ngokuthembekileyo nangobubele. ... Kaninzi
Ukukhathala kuyinto eqhelekileyo namhlanje, kuba umntu oyifumanayo uya kunyanzelwa ukuba achithe imali ngenxa yezizathu zobungcali. Kwelinye icala, uyakuhlala ephantsi koxinzelelo kwaye abo asebenza nabo abayi kuhlangabezana neemfuno zakhe. Umhla awulunganga kwiziqalo ezitsha, kuba oko kubonisa ukuba umntu uya kudinwa, ngaphandle kwesibonelelo esikhulu.
Umsebenzi Wobungcali: Unxibelelwano lwakho nabanye namhlanje luya kuzisa ubunzima. Abafowunelwa bakho okanye iingxoxo zihlehlisiwe. Kuya kufuneka, nangona kunjalo, ujolise ingqalelo yakho kwimisebenzi yokomoya, ekwafuna uqeqesho. Cwangcisa izicwangciso zakho zamabhongo ngolunye usuku xa le ntshukumo yeplanethi iphelile. Yoyisa ukucinga okungalunganga. ... Kaninzi
Iingxoxo ezakhayo kunye nencoko yababini luphawu losuku. Iingxaki ezinokubakho ngaphambili kwaye ngenxa yokungaqondani zisonjululwe. Ingcali: Umsebenzi wokomoya, umbutho kunye nothethathethwano, ngawo amagama amathathu akugubungela kwimisebenzi yakho yangoku. Emva kwayo yonke loo nto, olunye uphuhliso luzisa olunye kunye nesiphumo esihle sokucinga, umbutho kunye nezivumelwano ezilungileyo. ... Kaninzi
Namhlanje kunokubakho utshintsho kwimood yakho nakwisayikholoji, ngenxa yonxibelelwano lwakho nomnye umntu. Kukho ithuba leendaba ezilungileyo ezivela emntwini. ... Kaninzi
Usuku olubi kubaqalayo nolungamkelekanga ekuthengeni oomatshini, iindlela zothutho kunye nezinto zombane. Unokufumana ukubuyela umva okusingqongileyo, okukhokelela kulibaziseko kwimicimbi yakho, ekwanxulumene nabanye abantu. Kuya kufuneka uzame ukuba nenjongo, uzibeke endaweni yabanye kwaye ungavumeli imithambo-luvo yakho ithathe indawo yokucinga. Khumbula ukuba amaxesha amaninzi ayisosiphoso sabanye ukulibaziseka okanye isiphumo esibi. Inokuba ikhe yenzeka nakubo.
INgcali: Zilumkele izivumelwano zakho namhla. Ngokuqinisekileyo akukho lunye lweentsuku zakho ezilungileyo zokurhweba. Wonke umntu ufuna ukusebenza nawe ngenxa yomoya wokubuka iindwendwe onawo, kodwa ayizisebenzeli iimfuno zakho konke konke. ... Kaninzi
Ngapha koko, yena! Olu lusuku lweengxoxo, lwenkampani kunye nonxibelelwano. Usuku aluyithandi yonke into ebalulekileyo, kodwa ikwenza uthambekele ekulahlekeni ngexesha, usenza kwaye uxoxe ngezinto ezininzi ezingabalulekanga. Ukuqhakamshelana nabasetyhini kuthandwa kakhulu.
Umsebenzi wobungcali: Ngenxa yokuba iimoods zakho ziya kulawula ingqondo yakho, kububulumko ukuqokelela ulwazi kunokwenza izigqibo. Emva kwayo yonke loo nto, xa uzazi iinkcukacha, ingqondo iyacoca kwaye iimpendulo zihleliwe. ... Kaninzi
Iingxoxo eziza kwenzeka kulo naliphi na inqanaba nokuba zezobuqu okanye ezobuhlobo okanye ezobuchwephesha ziya kuba zezakhayo kwaye ziya kukunceda wenze izigqibo ezingcono.
Ingcali: Ukuziqonda kwakho kunamandla kakhulu kwaye uyayazi into oyifunayo. Uyazi ukuba ungafezekisa okuninzi ngokusebenza nabanye. Yonke imisebenzi kunye nothethathethwano ziya kuhamba kakuhle namhlanje. ... Kaninzi
Imvisiswano iyasilela kwindalo esingqongileyo kwaye abafowunelwa babangela imithambo-luvo. Uyacaphuka ngenxa yabanye kwaye ufumane ukungakhathali malunga nento abafuna ukuyithetha kuwe.
Ingcali: Awunangqondo emsebenzini namhlanje kwaye utyekele ekubeni ulalanise nalapho kungafunekiyo. Kodwa usenokuzisola kamva. Ingakumbi ukuba unikezela kwinto ebalulekileyo kuwe. ... Kaninzi
Usuku olungileyo lokwenza izigqibo. Namhlanje kukho uxanduva kwaye awubhabhi emafini, ngokuchaseneyo uyazi kakuhle apho uhamba khona. Namhlanje unokufumana uncedo oluthile olubalulekileyo, lokufezekisa iinjongo zakho, kumntu onamandla okanye kumntu osele ekhulile. Ishishini
Lusuku oluhle lokwenza iinguqu ekudala zilindelwe. Izicwangciso zomsebenzi ezifuna ingqondo evulekileyo kunye notyalo-mali olulungileyo lokucinga kuya kufuneka zilinde kamva. ... Kaninzi
Namhlanje uphendula ngoko nangoko nangokuchanekileyo kuyo nantoni na eyenzekayo kuwe kwaye ungabanga okona kulungileyo unako ngalo mhla. Ukuqala kuyathandwa kunye nokuthengwa koomatshini, iindlela zothutho kunye nezinto zombane. Ishishini likaShishino: Lusuku olulungileyo ukubhengeza izicwangciso kude kube ngoku ubunqabile ukuveza. Khusela izimvo zakho kwaye kutheni ungaceli ukunyuswa. Uthethathethwano luyathandwa ukuba ukulungele ukuthatha umngcipheko ukufezekisa le nto uyifunayo. ... Kaninzi
Ulwazi lwakho ngokuqinisekileyo luya kuba luhle kakhulu. Amehlo akho alishumi elinesine: amathuba okuva into ekunika umdla uphakame kakhulu kwaye-okona kubaluleke kakhulu-unokufumana ithuba kumagama abakunxibelelanisi. ... Kaninzi
Kuba Amandla, Ukulahla, Ukucaca, Ukonwaba, Umzimba, Amathamsanqa, Unyaka, Guqula, Ukuphefumlelwa, Ubutyebi!
Usuku lokuzalwa Uhlalutyo kwaye Imephu
Umntu ngamnye Uqikelelo
Uqikelelo lweSmart ngokujonga nje! Ukuwela.
Uqikelelo Kuba Zonke
Horoscope yokuzalwa, Ukuqhubela phambili, Ukuwela, I-Synastry, Inkqubela phambili yeSynastria, Ikhompawundi, Uhambo oluntsonkothileyo.
Ukuhamba kwakho ngexesha lokwenyani
Ukuwela kwaye Usuku lokuzalwa.
Lungelelanisa ubomi bakho ngeenkwenkwezi ukuze uphumelele!
Uhlalutyo Isynastry ye-erotic kunye nokuhambelana. I-Synastry Inkanuko, ubuNgcali, uMzali noMntwana, ubuhlobo kunye nabuphi na ubudlelwane